Sicela ufunde le Migomo Nemibandela ngokucophelela. Le migomo nesimo sibhekisela ekusetshenzisweni kokuqukethwe kukaBomiBogger. Kubalulekile ukuphawula ukuthi asivumeli ukusetshenziswa kwe-RSS feeds yethu kwiwebhusayithi yokukhiqiza okuzenzakalelayo.
Ukufinyelela kwakho nokusebenzisa okuqukethwe kwewebhusayithi kufakwe esimweni sokwamukelwa kwakho nokuhambisana nale migomo. Le migomo isebenza kuzo zonke izivakashi.
Ngokufinyelela iwebhusayithi, uyavuma ukuthi uboshiwe yiMigomo.
Izixhumanisi Kwamanye Amasayithi Ewebhu
Isevisi yethu ingaqukatha izixhumanisi kumasayithi ewebhu wesithathu noma amasevisi angenayo noma alawulwa yi-LifeBogger.
I-LifeBogger ayinakho ukulawula, futhi ayitholi umthwalo wemfanelo, okuqukethwe, izinqubomgomo zobumfihlo, noma imikhuba yamanye amasayithi we-third party noma amasevisi. Uyaqhubeka futhi uyavuma futhi uyavuma ukuthi i-LifeBogger ngeke ibe nesibophezelo noma inesibopho, ngokuqondile noma ngokungaqondile, nganoma yimuphi umonakalo noma ukulahlekelwa okubangelwa noma okusolakala ukuthi kubangelwa noma mayelana nokusetshenziswa noma ukuthembela kunoma yikuphi okuqukethwe, izimpahla noma amasevisi atholakalayo noma noma yiziphi izingosi ezinjalo noma amasevisi.
Sikululeka ngokuqinile ukuthi ufunde imigomo nemibandela nemigomo yobumfihlo yamanye amasayithi we-third party noma amasevisi owavakashelayo.
Singase sigcine noma simise ukufinyelela ku-Service yethu ngokushesha, ngaphandle kokuphawula noma ukukhokha, nganoma yisiphi isizathu, kufaka ngaphandle kokukhawulelana uma uphula imigomo.
Zonke izinhlinzeko zeMigomo okumele ziqhubeke zisinde ekupheleni kwayo ziyoqhubeka nokuqedwa, kufaka phakathi, ngaphandle kokunciphisa, ukuhlinzekwa kobunikazi, ukukhishwa kwewaranti, ukukhokha kanye nokulinganiselwa kwemfanelo.
Le migomo iyobuswa futhi ilandwe ngokuhambisana nemithetho yaseNigeria, ngaphandle kokubhekisana nezinhlinzeko zayo zokuphikisana komthetho.
Ukuhluleka kwethu ukuphoqelela noma yikuphi ilungelo noma ukuhlinzekwa kwalemigomo ngeke kubhekwe njengalapho kulawo malungelo. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalemigomo kubanjwe kungavumelekile noma kungenakuqiniswa yinkantolo, izinhlinzeko ezisele zale Migomo zizoqhubeka zisebenza. Le migomo yakha isivumelwano sonke phakathi kwethu mayelana neNkonzo yethu, futhi siphakamise futhi sithathe noma yiziphi izivumelwano zangaphambili esingase sibe nazo phakathi kwethu mayelana neNkonzo.
Sigcina ilungelo, ngokuqonda kwethu kuphela, ukuguqula noma ukuguqula le Migomo nganoma yisiphi isikhathi. Uma ukubuyekezwa kuyisici sizozama ukunikeza isaziso sezinsuku ze-30 ngaphambi kwanoma yimiphi imigomo emisha ukusebenza. Okusho ukuthi ushintsho lwezinto ezibonakalayo luzonqunywa ngokuqonda kwethu kuphela.
Ngokuqhubeka nokufinyelela noma ukusebenzisa isevisi yethu ngemuva kokuba lezo zibuyekezo ziphumelele, uyavuma ukuthi uboshiwe ngemigomo ebuyekeziwe. Uma ungavumelani nemibandela emisha, sicela uyeke ukusebenzisa isevisi.
Uma unemibuzo mayelana nale migomo, sicela uxhumane nathi ku-lifebogger@gmail.com